महिलाहरूले राती यस्ता काम गरे लक्ष्मीकाे बास हुन्छ ! - Nepal Insider
महिलाहरूले राती यस्ता काम गरे लक्ष्मीकाे बास हुन्छ !
January 12, 2020 363
पाेखरा २७ पुस- महिलालाई घरको लक्ष्मी मानिन्छ । महिला जसको घर जान्छिन् त्यस घरको परिवारको भाग्य र सफलता उनीसँग जोडिएको मानिन्छ तर ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता कामहरु हुन्छन् जसलाई महिलाहरुले राति गर्नुहुँदैन । यसका कारण उनीहरुको समेत भाग्य फेरिने गर्छ ।
Prevहोन्डाले नेपाल ल्यायो नयाँ बाइक, यस्तो छ मूल्य र बिशेषता
Nextसंसदमा कोमल वलीले भनिन्, दिलीपका ह’त्या’रा’लाई क’डा का’र’वा’ही होस्
इन्द्रेणी टिम नयां दिल्ली प्रस्थान…
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (34290)